Samsung ဖိုရမ်များသည် Galaxy S8 ၏ကျပန်းနှင့်ရုတ်တရက် reboots များနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားမှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည် Androidsis
Galaxy S8 ၏ကျပန်းနှင့်ရုတ်တရက်ပြန်ဖွင့်ခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ Samsung ဖိုရမ်များမှတိုင်ကြားချက်များပြည့်နှက်နေသည်
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသာလျှင်ကျနော်တို့အပေါ်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြသည် အနီရောင်မျက်နှာပြင်ပြproblemနာ Samsung ၏ဖန်သားမျက်နှာပြင်ကိုက်ညှိမှုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည့် Galaxy S8 ၏အချို့ယူနစ်များတွင်ယခု Galaxy S8 နှင့် S8 Plus အသစ်များကို ၀ ယ်ယူသူများသည်ဤပြသနာများတွင်နောက်ထပ်ပြproblemနာတစ်ခုရှိနေခြင်းအပေါ်ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြသည်။
ကြည့်ရသည်မှာ အချို့ Galaxy S8 ၏ယူနစ်များသည်ကျပန်းနှင့်ရုတ်တရက်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲပြန်လည်စတင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်း reboot များသည်တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်များစွာဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။
XDA Developers နှင့်တရားဝင်ဖိုရမ်များအပေါ်တိုင်ကြားမှုများ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Samsung အသိုင်းအဝိုင်း၏တရားဝင်စာမျက်နှာနှင့်ဖိုရမ်နှစ်ခုလုံး XDA Developers ၄ င်းတို့သည် Galaxy S8 အသုံးပြုသူများရဲ့ပြန်လည်နစ်နာမှုများကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့တိုင်ကြားစာတွေနဲ့ပြည့်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Samsung ကတော့ဒီပြproblemနာကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
အသုံးပြုသူအချို့ကမှတ်ချက်ပေးသည် microSD ကဒ်များသည်အပြစ်ဖို့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည် ဤ reboot များကိုတစ်နေ့ကြိမ်အကြိမ်များစွာဖြစ်ပေါ်စေပြီးပြသနာကိုကျော်လွှားရန်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ reboots ရပ်တန့်မသွားကိုကြည့်ရှုရန်အတွက် memory card ကိုဖယ်ရှား။ ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အခြားသူများကဤသည် terminal သော့ခတ်စနစ်အတွင်းရှိချို့ယွင်းချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပြtheနာတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုဆိုကြသည် Always-On မျက်နှာပြင်ပြသမှု သို့မဟုတ်၏ function ကိုအတူ စွမ်းအင်ချွေတာရေး.
ယခုအချိန်တွင် Galaxy S8 တွင်ဤကျပန်း reboot လုပ်ရခြင်း၏အကြောင်းပြချက်အတိအကျကိုမသိရသေးပါ။ သို့သော် Samsung အနေဖြင့်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာမီစကားပြောမည်ဖြစ်ပြီးအချို့သောပြသနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မည့်နည်းစနစ်တစ်ခုကိုလည်းထုတ်ပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ထူးဆန်းသောအနီအရောင်နှင့်အတူရောက်လာသည့်၎င်း၏သင်္ဘောမျက်နှာပြင်။ insignia ။
သင်၏ Galaxy S8 သို့မဟုတ် Galaxy S8 Plus တွင်အလားတူပြproblemနာမျိုးကြုံခဲ့ဖူးပါသလား။ မှတ်ချက်များအပိုင်းမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြရန်အခမဲ့ခံစားရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Galaxy S8 ၏ကျပန်းနှင့်ရုတ်တရက်ပြန်ဖွင့်ခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ Samsung ဖိုရမ်များမှတိုင်ကြားချက်များပြည့်နှက်နေသည်
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်များသောအားဖြင့်ပြောရလျှင် Samsung S (သို့) Iphones နှင့်အခြားမော်ဒယ်များနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသာထွက်ပေါ်လာသူများနှင့်အတူထွက်ပေါ်လာမည့်သူများကိုသူတို့နားမလည်နိုင်တော့ပဲဖြစ်ခဲ့မည်၊ ကွာပေးထားသို့မဟုတ်ကြီးမားတဲ့လျှော့စျေးနှင့်အတူကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ သငျသညျရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ် 1 သို့မဟုတ်2လအတွင်းသွားနှင့်ဤသို့မဟုတ်အခြားသူများကဲ့သို့ပြlikeနာများနှင့်ကျရှုံးခြင်းပေါ်လာသည့်ဖိုရမ်များကိုဖတ်ရှုဖို့လိုတယ်နှင့်တ ဦး တည်းသူတို့ထွက်လာသည်အဖြစ်မကြာမီသူတို့ကဆိုပါတယ်ပျက်ကွက်၏ပခုံးကိုမျိုချနိုင်ကြောင်း။ ငါစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာကိုမဝယ်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအရင်ကပြproblemsနာတွေအကြောင်းဖတ်ပြီးပြproblemsနာတွေကိုရှောင်ပြီးပြန်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ရတော့မယ်။
ယရှေု Valero Gonzalez ဟုသူကပြောသည်
Jesús Valero Gonzálezအားပြန်ပြောပါ
မကျေနပ်ချက်တွေများတဲ့ဓါတ်ပုံတွေရှိတယ်။ ငါဘာကြောင့်နေ့တိုင်းအင်တာနက်ယုံကြည်မှုလျော့နည်းနေရတာလဲ။ ထုတ်ဝေတာကဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ။
Miguel Angel Perez Vega နေရာချထားပုံ ဟုသူကပြောသည်
Lagsung တစ်ဝက် fucked ဖြစ်ပါတယ်
Miguel Angel Perez Vega အားပြန်ပြောပါ
Neskertz ကောက် ဟုသူကပြောသည်
ငါက Samsung စီးရီးနဲ့အဆုံးသတ်လိမ့်မည်ဟုခံစားချက်ရှိသည်။
Neskertz Centeno အားပြန်ကြားပါ
ပါပလော Tipan Pazmiño ဟုသူကပြောသည်
Pablo Tipan Pazmiñoအားပြန်ပြောပါ
ငါ S8 + နဲ့အတူ ၂၁ ကြိမ်မြောက်ပြီးပြည့်စုံသောလည်ပတ်မှု၊ ၀ င်ရောက်မှုပြန်စခြင်း 21 င်သည်များရှိသူများအားကျေနပ်လောက်အောင်မှတ်ချက်ပေးရန်ပြန်လည်စတင်သည်။ ကြွင်းသောအရာတို့ကိုရှောင်ရန်။
Makenrow ပါဝါ ဟုသူကပြောသည်
Spam များကို သူတို့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်
Jose Joaquin Guevara ဟုသူကပြောသည်
P10 သို့မဟုတ် LG6 ပိုကောင်းတဲ့အဆိုပြုချက်ကို
Jose Joaquin Guevara ကိုပြန်သွားပါ
Gaston duarte ဟုသူကပြောသည်
ငါမှတ်ချက်ချန်ထားပါမင်္ဂလာပါ Xiaomi ။
Gaston Duarte အားစာပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်တွင် ၂၁ ကြိမ်မြောက်ကတည်းကကျွန်ုပ်၌ရှိသော်လည်းအဖုံးသို့မဟုတ်ကာကွယ်မှုကိုရှာမတွေ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤလ ၅ ရက်တိုင်အောင်မသုံးခဲ့ပါ၊ အမှန်တရားမှာ၎င်းသည် ၀ ယ်ယူခြင်းကြောင့် ၀ မ်းနည်းခြင်းထက်ပိုသောဓာတ်ပုံများ၊ ခံစားမိသည့်အခါပြန်လည်စတင်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်နှေးကွေးသွားသည်
ငါ့မှာ Galaxy s8 Plus ရှိတယ်၊ ငါရှိနေတဲ့ပြသနာက Wi-Fi မှာရှိနေတုန်း YouTube ဗီဒီယိုတွေကိုဖွင့်ခွင့်မပေးလို့ပါ
Edison ESPINOSA ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းမှာ၊ ကျွန်ုပ်မှာ Samsun Galaxy S8 Plus ရှိသည်။ ငါဖုန်းခေါ်တိုင်းအချိန်တိုင်းအခြားတစ်ဖက်တွင်ကလစ်နှိပ်သည့်အသံဆူညံသံပေါ်လာသည်သို့မဟုတ်ဖုန်းကိုကောက်နေသကဲ့သို့ငါသည်လည်းတစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်စကားပြောနေပြီးရုတ်တရက်ရပ်လိုက်သည်။ ငါသည်လည်းကြားလျှင်သူတို့သည်ငါ့စကားကိုနားမထောင်၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကဘာတွေဖြစ်နေလဲသိလားကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်ချက်ပေးပါ
EDISON ESPINOSA သို့ပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါကျွန်ုပ်၏ s8 ၌ရှိသောသူငယ်ချင်းများကျွန်ုပ်၏ဖုန်းပျက်ကွက်မှုကကျွန်ုပ် Facebook ကိုစွန့်ခွာသောအခါနောက်ခံနှစ်ဆခုန်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထို application နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ သူဘာဖြစ်မည်ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကသိသည်။ သူတို့ကပြန်လည်ပို့ရန်ကျွန်ုပ်ကိုတစ်ပတ်သာထားခဲ့သည်။
Neus Escachx ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာတစ်လတောင်မပြည့်သော s8 plus ဖုန်းကိုသုံးထားပါသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်မိုက်ခရိုပျောက်ဆုံးနေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာငါခေါ်သောအခါသို့မဟုတ်သူတို့သည်ငါ့ကိုခေါ်သောအခါသူတို့သည်ငါ့ကိုနားမထောင် ... ဖြစ်ပျက်နေသောအရာကိုမည်သူမဆိုသိကြသလော မနက်ဖြန်ငါယူမယ်၊ သူတို့ပြောတာကိုငါကြည့်တော့မယ်၊ စိတ်ပျက်သွားတယ်
Neus Escachx အားစာပြန်ပါ
မာရီယာယရှေု Vico Luna ဟုသူကပြောသည်
ငါနှင့်ငါ့တူအတူတူလား မည်သူ့ကိုမျှစကားမပြောနိုင်ပါ၊ ကြားဖြတ်။ မကြားနိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင်ကြားသိရသည်မှာကြားရသော်လည်းဤကဲ့သို့သောလူများထပ်မံပေါ်ပေါက်လာသည်။ အသစ်တစ်ခုကိုအဘို့အကြှနျုပျကိုက။ မင်းကဘာအရောင်လဲ သတ္တုတွင်းသည်မီးခိုးရောင် orchid ဖြစ်ပြီးယခုကျွန်ုပ်ငွေပြောင်းသွားမည်။
MaríaJesús Vico Luna အားပြန်ပြောပါ
ခြံစည်းရိုးကိုက်တာကယူရို ၉၀၀ ကုန်ကျတယ်။ ပြီးတော့ဆိုးဝါးတဲ့ဆက်သွယ်မှုလည်းရှိနေတယ်၊ ​​အင်တာနက်ကအရမ်းနှေးတယ်၊ မီးတောက်လည်းမကြားဘူး ငါအရမ်းစိတ်ပျက်မိပါတယ်
စိတ်ပျက်အားလျော့… ..my s8 ပေါင်းနှစ်ပတ်မပြည့်သေးသော……။ ဤအချိန်တွင်ကံကောင်းခြင်းရှိ၊ မရှိသိရန် terminal ကိုအခြားတစ်ခုဖြင့်အစားထိုးမည်ကိုကျွန်ုပ်စောင့်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်ပြုလုပ်သောခေါ်ဆိုမှုများသည်၎င်းတို့ကိုအပြည့်အဝကြားနာနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာမျှမကြားရပါ၊ ကျွန်ုပ်၏အသံသည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုအဖြေပေးနိုင်မလား။ ဒါဟာအသစ်တခုနှင့်အတူငါ့ကိုနောက်တဖန်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ် ... ???? မီးခိုးရောင်သစ်ခွဟာငါ့ကိုမအောင်မြင်တဲ့အရာပါ။ အခုအဲဒါကိုငွေရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီ၊ ဘာဖြစ်လဲဆိုတာကြည့်ရအောင် ......
ငါ s8 ရှိသည်နှင့်3ရက်အကြာက rebooting စတင်ခဲ့သည်။ Samsung ကိုဘာကြောင့်တိုင်တန်းတာလဲ၊ ဆက်သွယ်တာလဲလို့ဘယ်သူ့ကိုမှသိလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်တွင် samsung s8 ရှိသည်လွန်ခဲ့သော2ပတ်က၎င်းသည်သူ့ဟာသူ reboot လုပ်ပြီးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလုပ်ရပ်များ၏သတင်းစကားသည်စိတ်အညစ်ဖြစ်သည်
René pari သို့ပြန်သွားပါ
တစ်လတည်းသာရေထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။ သူတို့သေတာပဲသူတို့သေတာပဲ။ ငါပြန်သေပြီနောက်တစ်ခါပြန်သေသွားပြီ။ အခုတော့သူတို့ကသေဖို့ယူရို ၇၀၀ ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။
အဘယ်အရာကိုမျှ submersible ဖြစ်ပါတယ် ... ဒါပေမယ့်ထုတ်လုပ်သူကဖုံးလွှမ်းမထားဘူး။
Jesus Diaz Silveira ဟုသူကပြောသည်
JesúsDíaz Silveira အားပြန်ပြောပါ
Ulefone Power 2၊ မကြုံစဖူးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည့် terminal